Nayakhabar.com: सरकारले छान्यो साढे तीन लाख गरिब नेपाली, कस्ता कस्ता परे छनौटमा ,केके छ सुविधा ?
सरकारले छान्यो साढे तीन लाख गरिब नेपाली, कस्ता कस्ता परे छनौटमा ,केके छ सुविधा ?
काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन लाख ५६ हजार ४१८ गरिबको पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले हिमाल, पहाड, र तराईका २५ जिल्लामा प्रारम्भिक चरणमा गरेको सर्वेक्षणमा गरिबलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।
अति गरिबमा ५० प्रतिशत छन्, जो साझँ बिहान के खाने भन्ने समस्यामा छन् । गबिमा ३० प्रतिशत त्यस्ता छन्, जो दुख गरी जेनतेन हातमुखसम्म जोर्न सक्ने अवस्थामा छन् । त्यस्तैगरी गरिबीको सङ्घारमा २० प्रतिशत जनता टन्, जसको आर्थिक गतिविधिमा ध्यान नदिने हो भने अब छिट्टै गरिब बन्ने अवस्थामा रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मानिसको आम्दानीको स्रोत, घरको अवस्था तथा खानपिनको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुँचजस्ता विषयलाई आधार बनाएर सर्वेक्षण गरिएको थियो । कर्णालीमा धेरै गरिब भेटिएका छन् ।
केहीका बारेमा उजुरुी परेकाले आगामी असोजसम्ममा गरिने दोस्रो चरणको सर्वेक्षणमा केही संख्या घट्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।